Maraakiibta Doonta iyo Qalabka - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Fiberglass-ka balaastikada (FRP) la xoojiyay iyo qalabka ku habboon ayaa alaabo ku habboon oo qiimo jaban u leh dhismaha markab ahaan faa'iidooyinkooduna waa sida hoos ku qoran:
- cimri dheer adeeg iyo faa iidooyin balaaran
- Kharashaadka dayactirka oo yar: tuubbooyinka fiberlass-ka iyo qalabka dhejiska waxaa lagu muujiyaa iska caabbinta jirka, iska caabinta nabaad-guurka iyo iska caabbinta wasakhowga, sidaa darteed looma baahna in la sameeyo ilaalinta miridhku ilaaliyo wasaqda iyo daweynta sunta, taas oo badbaadin karta qarashka dayactirka 70%.
- Dhaqdhaqaaq aan firfircoonayn: tuubbooyinka fiberglass-ka iyo xirxirayaashu waa kuwa aan-haynin lahayn, sidaa darteed waxay ku habboon yihiin fiilooyinka.
- Naqshadeysan: waxaa loo qaabayn karaa loona sameyn karaa iyadoo lagu saleynayo cadaadis kala duwan, heerka socodka iyo adkaanta, iwm.
- Caabudinta Abrasion: geli biyo jilicsan oo ciid ku shub tuubada si ay u sameeyaan tijaabada burburka. Dhumucda qoto-dheer ee tuubbada birta ee daboolan caarada waa 0.52mm, halka tuubbooyinka fiberlass ka dib daweynta adag ay tahay kaliya 0.21mm.
Nidaamka tuubooyinka ayaa laga heli karaa qiyaaso dheellitir oo kala duwan oo cabirkoodu dhan yahay 10 ilaa 4000mm. Qaabab weyn ama qaabab khaas ah oo tuubooyin iyo xirxirayaal ayaa la heli karaa markii la codsado.
Tuubbooyinka Fiberglass waxay ka kooban yihiin liner bir ah oo saafi ah, daahyada galaaska iyo gogosha xargaha / heerkulka, lakabka dhismaha iyo lakabka dusha, oo leh culeyska naqshadeynta ilaa 32 bar, iyo ugu badnaan. heerkulka 130 ℃ dareerayaasha iyo 170 ℃ gaasaska.
Mararka qaarkood, si aad ula kulanto bey'ad aad u kulul oo dabayshu kacsan tahay, naqshadaha Jrain iyo waxsoosaarka ayaa sameeya labbo xarig oo dusha sare ka samaysan, kaas oo ah isku-xirka kuleylka iyo qaab-dhismeedka fiberglass.
Jaan-gooyeyaasha caadiga ah ee heer-kulka waxaa ka mid ah PVC, CPVC, PP, PE, PVDF, iwm.
Isku-darka xoogga FRP iyo isku-darka kiimikada ee balaastigga waxay macaamiisha siisaa fursad ka sarreysa oo ka sameysan aluminiinka birta ah iyo bir-sidaha ka samaysan.
Tuubbooyinka muraayadaha indhaha iyo rakibida dhismaha markabku waxay sidoo kale bixin karaan dahaadhka deegaan qabow. Adeegsiga dahaarista polyurethane wuxuu ku dhammaaday daarta 'FRP' si loo ilaaliyo xayiraadda
Jrain waxay bixisaa tuubooyin iyo qalab ku habboon si ay ula kulmaan heerar badan oo heer qaran iyo caalami ah iyadoo kuxiran codsiyada ay ka mid yihiin DIN, ASTM, AWWA, BS, ISO iyo kuwa kaloo badan.
Alaabada 'Fiberglass' waxay leeyihiin faa'iidooyin badan sida kuwa soo socda
Dib u gurashada dabka
Fiberlass-ka Farsamaysan, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Caaryada, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Dhoolatus gacmeed,